डाउनलोड Opera Free VPN APK को लागी Android
डाउनलोड Opera Free VPN
यो एउटा अनुप्रयोग हो जसले तपाईंलाई आफ्नो मोबाइल उपकरणमा मानक VPN सुविधाहरू प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ। प्रयोगकर्ताको IP ठेगाना लुकाउन मद्दत गर्छ, विज्ञापनहरूबाट जोगाउँछ। कार्यक्रम नि: शुल्क वितरण गरिएको छ, रूसी भाषा समर्थन गर्दछ।
इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूका लागि, स्रोत अवरुद्ध, ह्याकर आक्रमण, घुसपैठ विज्ञापन जस्ता घटनाहरू सामान्य भइसकेका छन्। इन्टरनेटमा तपाईंको काम सुरक्षित गर्न, त्यहाँ प्रोग्रामहरू छन् जसले प्रयोगकर्ताको डेटा इन्क्रिप्ट गर्छ र तपाईंको अनलाइन उपस्थिति लुकाउँछ। त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा ओपेरा VPN समावेश छ, जसले मद्दत गर्दछ:
वास्तविक IP ठेगाना लुकाउनुहोस् र नेटवर्कमा अज्ञात उपस्थिति प्रदान गर्नुहोस्;
प्रयोगकर्ता जडान भएको Wi-Fi नेटवर्कको सुरक्षा स्तर निर्धारण गर्नुहोस्;
विज्ञापन र विज्ञापन ट्र्याकरहरू रोक्नुहोस्;
प्रयोगकर्ताले नेटवर्क पहुँच गर्ने क्षेत्र परिवर्तन गर्नुहोस्।
ओपेरा ब्राउजरमा निर्मित VPN कसरी सक्षम गर्ने
कार्यक्रम नि:शुल्क वितरण गरिएको छ र आधिकारिक रूपमा विकासकर्ताहरू द्वारा समर्थित छ। कुनै पनि प्रयोगकर्ताले साइटमा फारम मार्फत प्रश्नको साथ तिनीहरूलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ।
Opera Free VPN सँग जीवन्त, रंगीन इन्टरफेस छ। अनुप्रयोग उपकरणहरू संकेतहरू र तिनीहरूले कसरी काम गर्छन् भन्ने व्याख्याको साथमा छन्। कार्यक्रमको प्रत्येक प्रकार्यको कार्यान्वयन स्पष्ट रूपमा देखाइएको छ:
कार्यहरूको स्थिति र गतिविधि प्रदर्शित हुन्छ;
कार्यक्रम सञ्जालमा जडान भएको क्षेत्र दृश्यात्मक छ;
यन्त्र जडान भएको नेटवर्कको सुरक्षा मूल्याङ्कन देखाउँछ;
अवरुद्ध विज्ञापन को संख्या मा एक रिपोर्ट प्रस्तुत गरिएको छ।
यस अनुप्रयोगका केही बेफाइदाहरू छन्:
क्षेत्रहरूको संख्या जस मार्फत कार्यक्रमले नेटवर्कमा जडान पुन: निर्देशित गर्दछ पाँच देशहरूमा सीमित छ (जर्मनी, क्यानाडा, नेदरल्याण्ड, सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका);
कार्यक्रमले तपाईंलाई टोरेन्टहरूसँग काम गर्न अनुमति दिँदैन।
Opera Free VPN लाई विकासकर्ताहरूको आधिकारिक समर्थनमा इन्टरनेटमा नि:शुल्क सुरक्षा प्राप्त गर्न चाहने प्रयोगकर्ताहरूका लागि सिफारिस गरिन्छ। तपाईले हालको संस्करण डाउनलोड्रो पोर्टलमा छिटो र नि:शुल्क डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ।
नि:शुल्क डाउनलोड Opera Free VPN को लागी Android प्लेटफर्म.
Opera Free VPN चश्मा
ExpressVPN मोबाइल उपकरणबाट इन्टरनेट ब्राउज गर्दा आफ्नो गोपनीयता सुरक्षित गर्न आवश्यक ती...
SuperVPN नि: शुल्क VPN क्लाइन्ट एक प्रोग्राम हो जसले तपाइँलाई तपाइँको वास्तविक स्थान स्क्रिनको केवल...
Turbo VPN एउटा कार्यक्रम हो जसले तपाइँलाई तपाइँको स्मार्टफोन वा ट्याब्लेटमा VPN को पूर्ण लाभ लिन...
IPVanish VPN सबैभन्दा शक्तिशाली अनलाइन गोपनीयता सुरक्षा सफ्टवेयर मध्ये एक हो। IPVanish VPN को साथ,...
SkyVPN एउटा मोबाइल अनुप्रयोग हो जसले तपाईंलाई सजिलैसँग आवश्यक साइटहरू अनब्लक गर्न, Wi-Fi...
PureVPN ले असीमित VPN ब्यान्डविथ प्रदान गर्दछ जुन दुबै Wi-Fi र मोबाइल नेटवर्कहरूमा उच्च गतिको साथमा...
NordVPN ले तपाइँलाई 60 देशहरूमा 5,000 भन्दा बढी विश्वसनीय VPN सर्भरहरू मध्ये कुनै पनि छिटो जडान...
यो एउटा अनुप्रयोग हो जसले तपाईंलाई आफ्नो मोबाइल उपकरणमा मानक VPN सुविधाहरू प्रयोग गर्न अनुमति...
निजी इन्टरनेट पहुँच द्वारा VPN ले तपाइँको वास्तविक आईपी ठेगाना लुकाउँछ र ट्राफिक इन्क्रिप्ट गर्दछ,...
TunnelBear VPN एक सार्वजनिक Wi-Fi नेटवर्कमा जडान हुँदा पनि, व्यक्तिगत डेटा अनलाइन सुरक्षित गर्नको...